Ukuhambisa nge-GBL iYurophu kuhlala kusenziwa ngabathunyelwa ngobungcali
ikhayaUkuhambisa & ukulandela kunye nokulandela umkhondo
Ukuhanjiswa kwe-GBL-Ungaze ngaphandle kokulandela ikhowudi
Ukuhambisa kwenziwa kuphela ngeenqanawa ezinkulu kunye ezithembakeleyo. Kwaye ngokuqinisekileyo uya kuhlala ufumana ikhowudi yokulandela umkhondo nge-imeyile. Uya kuhlala uyazi ukuba iphi ipasele kwaye uyakuba yintoni umhla oqikelelweyo wokuhambisa.
Amaxwebhu afanelekileyo othutho:
I-GBL iYurophu inokwakhe REACH ubhaliso *. 01-2119471839-21-0023
Kunye nazo zonke izinto zethu ezithunyelwayo zihlala zihleli Iphepha leDatha yoKhuseleko kunye nesiqinisekiso sohlalutyo COA.
* 'UBhaliso, uVavanyo, ugunyaziso kunye nokuThintelwa kweeKhemikhali (i-REACH) yi Umgaqo we-European Union Ngomhla we-18 ngo-Disemba 2006. UKUHLAZA ukujongana nemveliso kunye nokusetyenziswa kwe izinto zeekhemikhali, kunye neempembelelo ezinokubakho kwimpilo yomntu kunye nokusingqongileyo. Amaphepha ayo e-849 athatha iminyaka esixhenxe ukuba idlule, kwaye ichazwe njengowona mthetho untsonkothileyo kwimbali yoManyano kunye nongabalulekanga kwiminyaka ye-20. Ngowona mthetho ungqongqo ukuza kuthi ga ngoku ukulawula izinto zekhemikhali kwaye kuya kuchaphazela amashishini kwihlabathi liphela. I-reach ingene kwi-1 kaJuni 2007, kunye nokuphunyezwa ngezigaba kule minyaka ilishumi izayo. Ummiselo nawo usekwe I-arhente yeekhemikhali yaseYurophu, elawula ubuchwephesha, isayensi kunye nolawulo kwimicimbi yeReach. '
Phinda umise umgaqo-nkqubo
Siya kwenza njalo Nye Ukubuyela simahla emva kokuba inqanawa iqinisekisile ukuba ukuhanjiswa akuzange kwenziwe. Ngaphandle kwalomgaqo amazwe e-Scandinavia.